Shariif iyo Kheyre oo ka hor yimid qorshaha mucaaradka | KEYDMEDIA ONLINE
Shariif iyo Kheyre oo ka hor yimid qorshaha mucaaradka
Sida ay xuguhu caddeynayaan, Shariif "TumaWallahi" iyo Kheyre, wuxa ay si guud kaga soo hor jeedaan, in dib loo soo celiyo Badbaado Qaran, halka ay diiddan yihiin in dib loogu laabto doorashada kuraastii la boobay.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowg Murashaxiinta oo hore u qaadacay natiijada doorashada Golaha Shacabka, kadib markii la baalmaray dhammaan shuruudihii hufnaanta iyo daahfurnaanta, ayay 10/12/21 soo bandhigeen sida lagu sixi karo habraaca doorashada waxayna ku baaqeen in la isugu yimaado shir lagu saxayo khilaafka ka taagan doorashada.
Hayeeshee, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda Xil-gaarsiinta, Maxamed Xuseen Rooble iyo hoggaanka dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka [DXDF], ayaa dhagaha ka fureystay baaqyada ka soo baxay golaha mucaaradka, waxa ay go’aansadeen inuu sidii hore ku sii socodo hannaanka doorashada, taas oo sababtay in xalay MM ku dhawaaqaan shirwayne wadatashi Qaran.
Sida ay Keydmedia Online, u xaqiijiyeen, xubno muhiim ah oo miisaan culus ku dhex leh, Musharixiinta, Madaxweynihii hore Sheekh Shariif Sheekh Axmed "TumaWallahi" iyo RW hore Xasan Cali Kheyre, ayaa ka hor yimid tallaabada uu Mucaaradku ku doonayo inuu caasimadda uga qabto shir wax-galka bulshadu isugu imaanayaan.
Sida ay KON, hore u baahisay Kheyre, ayaa dalka ka maqan ku dhawaad 50 cisho, wax lug ahna kuma lahayn dhamaan war-saxaafadeedyadii dhawaa ee Musharixiinta, wuxuu qanaaco xooggan ka muujiyay shanti kursi ee lagu boobay Dhuusamareeb, wuxuuna safar ku tagay Qatar, ka hor inta uusan u sii gudbin Norway.
MW, Shariif, ayaa dhankiisa dalka ka baxay sabtigii, wuxuuna maalmihii la soo dhaafay si weyn kaga gaabsaday guuxa mucaaradka iyo guud ahaan bulshada caasimadda oo ah in dhidibada loo taago Gole Qaran oo hor istaaga boobka doorashada dalka ka qabta xasaradaha siyaasadeed ee ku soo fool leh.
Sida ay xuguhu caddeynayaan, Shariif iyo Kheyre, wuxa ay si guud kaga soo hor jeedaan, in dib loo soo celiyo Badbaado Qaran, waxa ay diiddan yihiin in dib loogu laabto doorashada kuraastii la boobay, mana ogola dhismaha Gole, ay gar-hayeyn ka hiyiin Musharixiinta.
Xubnaha kale, waxa ay xalay ku baaqeen shirwayne wadatashi Qaran oo ay isugu imaanayaan Ahlu-xali Wal-caqdiga bulshada Soomaaliyeed, waxayna magacaabeen, Guddiga Qabanqaabada Shirwaynaha iyo Guddiga Amniga Shirwaynaha, taas oo ka dhigan in mucaardku u kala jabay labo garab.
Sheekh Shariif, wuxuu dhamaadkii bishii Febaraayo iyo bilowgii bishii April ee sanadkaan, dhowr kulan oo qarsoodi ah la qaatay Fahad Yaasiin, kaas oo ka xaal-mariyay gabood-fallo uu hore ugu geystay, halka ay khadka taleefanka ku wadahadleen Farmaajo, taas oo keentay inuu dalka ka baxo xilligii uu socday abaabulkii Badbaado Qaran.
KON, waxa ay mid ka mid ah taliyayaashii hore ee NISA, ka soo xigatay in xilligaas uu Sheekh Shariif, dacwo ka dhan ah MW Xasan Sheekh, RW Xasan Cali iyo Hoggaamiye CC Warsame, u gudbiyay wakiillada beesha calamka ee Xalane jooga isagoo ku eedeeyay in ay yihiin dagaal ooge-yaal, soona jeediyay in loo aqoonsado qaswadayaal.
Shiikh Shariif Shiikh Axmed, ayaa la xasuustaa xilligii uu ahaa, Guddoomiyihii Guddiga Fulinta Golahii Maxaakiimta, inuu billawgii 2007 isku dhiibey degaanka Hulugo oo ku yaalla xadka ay wadaagaan Kenya iyo Soomaaliya, saacado kadibna la geeyay Nairobi, taas oo lagu tilmaamay khiyaano uu ku sameeyay Golahii Maxaakiimta.
Kheyre, dhankiisa waa shaqsiga waqtiga ugu badan la soo shaqeeyay Farmaajo iyo Fahad Yaasiin, waxaana la rumeysan yahay in aysan jirin kala aragti duwanaasho buuran oo u dhaxeysa isaga iyo Kooxda Qatar taageerto ee Madaxtooyada sharci-darrada ku joogta.